10 Amazwi malunga ne-Iodine ye-Element
Iimpawu malunga ne-Element iodine
Iodine yinto ebhekene nayo kwietyuwa e-iodidi kunye nokutya odlayo. Inani elincinci le-iodine lubalulekile ekunesondlo, ngelixa kuninzi inetyhefu. Nazi izinto malunga ne-iodine.
Iodine ivela kwigama lesiGrike elithi iodes , oku kuthetha i-violet. Igesi ye-iodine i-violet-color.
Ama-isotop amaninzi e-iodine ayaziwa. Zonke ziyi-radioactive ngaphandle kwe-I-127.
Iodine eqinileyo ibomvu okomhlaza okombala kunye nokukhanya.
Kwiindawo eziqhelekileyo zokushisa kunye neengcinezelo, i-iodine sublimates ibe yerhasi yayo, ngoko ifom ye-liquid ayibonakali.
Iodine i- halogen , eyona uhlobo olungenalo isinyithi. Iodine inezinye iimpawu zesitye, nazo.
I-thyroid gland isebenzisa iodine ukwenza i-hormones thyroxine kunye ne-triiodotyronine. Iodine enganeleyo ikhokelela ekuphuhliseni i-goiter, okuyi-gulfe ye-thyroid gland. Ukuntuleka kwe-iody kukholelwa ukuba yimbangela ekhuselekayo yokulinda kwengqondo. Iimpawu ze-iodine ezigqithiseleyo zifana nezo-iodine. Ubunyoyi be-iodine bunzima kakhulu xa umntu enesakhono se-selenium.
Iodine ivela kwiimveliso kwaye njenge-molecule ye-diatomic I- 2 .
Iodine isetyenziswa kakhulu kwiyeza. Nangona kunjalo, abanye abantu bahlakulela ukukhathazeka kweekhemikhali kwi-iodine. Abantu abanomdla bangahlakulela ukukhawuleza xa bethwathwa nge-tincture ye-iodine. Kwiimeko ezinqabileyo, ukutshatyalaliswa kwe-anaphylactic kuye kwabangela ukuphuma kwonyango kwi-iodine.
Imithombo yokutya yemvelo ye-iodine yizilwanyana zaselwandle, i-kelp kunye nezityalo ezikhulile emhlabeni ocebileyo we-iodine. Iodidi ye potassium isoloko idibaniswa kwitheyibhile yokuvelisa ityuwa e-iodidi.
Inani le- athomu le -iodine linama-53, oko kuthetha ukuba ii-athomu zonke ze -iodine zinama-proton 53.
Injongo yo shishino
Ushishino, iodine ichitshiwe eChile kwaye ikhutshwe kwiibhulu ze-iodine ezicebileyo, ngokukodwa kwimimandla yeoli e-US naseJapan.
Zazen: Isingeniso kwiZen Meditation
Ukubamba iingxoxo kwiiKlasi zamaBanga aphakathi
IiKholeji ezineeDorms Best